लुम्बिनीमा तीन दिने बौद्ध महोत्सव - Sabal Post
१६ कार्यपत्रमाथि छलफल हुने
लुम्बिनी – लुम्बिनीमा तीन दिने अन्र्तराष्टिय बौद्ध कला, संस्कृति र साहित्व महोत्सव हुने भएको छ । प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको सहकार्यमा महोत्सव हुने भएको हो । माघ २४ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुने महोत्सवमा बौद्ध कला र साहित्यको प्रदर्शन तथा बौद्ध अध्ययन सम्बन्धी साहित्यको बिबिध विषयमा गोष्ठी हुदैछ । बौद्ध कला, संस्कृति र साहित्वको महोत्सव नेपालमै पहिलो पटक आयोजना भएको हो ।
महोत्सवकै अवधिमा मोलाम पुजा, बौद्ध कला, संस्कृति तथा साहित्यको प्रदर्शनी हुने लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यले जानकारी दिए । महोत्सवको पहिलो दिन माघ २४ गते विहान लुम्बिनीमा शान्ति दौड हुदैछ । दौडमा करिव ५ सय जनाको सहभागिता रहने भएको छ । शुक्रबार विहान ११ बजे महोत्सवको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रम लुम्बिनी विकास कोषको सभाहलमा हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
शुक्रबारबाटै विश्वविद्यालय परिसरमा अक्षेश्वर महाविहारको संयोजनमा बौद्ध कलाको प्रदर्शनी हुनेछ । प्रदर्शनीमा बौद्ध धर्म, संस्कृति सम्बन्धी विभिन्न समुदायको कलाकृति राखिने जनाइएको छ । विहान ११ बजेदेखि नै साँझसम्म बौद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम तय गरिएको छ । सभाहलमा हुने सो कार्यक्रममा बौद्ध धर्म र संस्कृति झल्किने नृत्यहरु गुन्ला, धिमे, चर्या नृत्य, योगी तथा अनुप्रास लगायतका कार्यक्रम हुनेछन् ।
माघ २५ गते मोलाम पुजा र योगासहित बिबिध बौद्ध विषयहरुमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुने कार्यक्रम तय गरिएको छ । पूर्व मन्त्री मोदनाथ प्रश्रित, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व राजदूत खगनाथ अधिकारी, टंक कार्की, विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. त्रिरत्न मानन्धर, डा. कुन्दन अर्याल, पुरातत्वविद् कोषप्रसाद आचार्य, बसन्त विडारी, प्राज्ञ गोपिरमण उपाध्याय सहितका १६ विद्धानहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने विश्वविद्यालयका डीन प्रा. डा. वेदप्रसाद गिरीले जानकारी दिए । कार्यपत्र प्रस्तुत २५ र २६ गते प्रस्तुत हुने उनले जानकारी दिए । महोत्सवको समापन २६ गते साँझ हुने भएको छ ।
आजदेखि ‘गरुड पुराण
एमसीसी परिमार्जन गरेर संसदबाट पारित हुन्छ :…
एउटा धारोको भरमा सिङ्गो बस्ती ,सिंगो दलितबस्ती…